Kwiphepha le-SEO Eyona ndlela isebenzayo ngo-2013: Imithetho esi-7 yoMdlalo | Martech Zone
Kwiphepha le-SEO Eyona misebenzi ilungileyo ngo-2013: Imithetho esi-7 yoMdlalo
Lwesine, ngoFebruwari 14, 2013 Lwesine, ngoFebruwari 14, 2013 I-Jayson DeMers
Ukuza kuthi ga ngoku, ndiqinisekile ukuba uvile ngokwaneleyo malunga nokusebenza kwephepha ukugcina ubomi bakho bonke. Andifuni ukuphinda amazwi afanayo obuweva ukusukela kunyaka ophelileyo. Ewe kwiphepha le-SEO libaluleke ngakumbi (andilikhumbuli ixesha apho bekungekho), kwaye ewe, kwiphepha le-SEO lingenza okanye liphule amathuba akho kwinqanaba eliphezulu kwii-Google SERPs. Kodwa into etshintshileyo yindlela esibona ngayo kwaye siziphatha ngayo kwiphepha le-SEO.
Uninzi lwee-SEO zihlala zicinga ukuba ukwenziwa kwiphepha elinephepha elithile lobuchwephesha. Uyayazi i-drill: i-meta tag, i-canonical URLs, i-alt tags, i-encoding efanelekileyo, eyakhiwe kakuhle, i-tag-umda wokugcina iithegi zetayitile, njl.
Zizo ezo iziseko. Okwangoku, bakhulile kakhulu esikolweni. Baqhubeka nokubonakala kuluhlu lwe-SEO olukwiphepha, kodwa mna nawe siyazi ukuba yonke idemografi ye-SEO itshintshile kakhulu, nangona isiseko esisiseko sihleli sinye. Ngenxa yolu tshintsho, indlela obona ngayo kwiphepha le-SEO kufuneka lizihlengahlengise ngokunjalo. Yiloo nto esiza kujonga kuyo ngoku.
Kwiphepha le-SEO: iSiseko
Ukuba iwebhusayithi yakho ayilungiswanga ngokufanelekileyo kwiphepha, iinzame zakho kwiwebhusayithi (ikhonkco lokwakha, ukuthengisa umxholo, imithombo yeendaba zentlalo) ngekhe kuvelise iziphumo ezibonakalayo. Ayisiyo yokuba ayizukuvelisa nto konke konke, kodwa ngaphezulu kwesiqingatha semizamo yakho inokugqibela ngokuhla idreyini.
Akukho ncwadi icacileyo yomthetho ethi: yenza u-X, Y, no-Z ekusebenzeni kwephepha kwaye inqanaba lakho liya kunyuka ngo-A, B, okanye ngo-C. Kwiphepha elisekwe kwiimvavanyo, kubahlalutyi kunye neempazamo. Ufunda okungakumbi malunga noku ngokufumanisa oko kungasebenzi kunoko kungasebenziyo.
Kodwa kuzo zonke izinto ekufuneka uzigcine engqondweni, kukho oku: Ukuba awuyikhathaleli iphepha lakho le-SEO, uya kuthi uwe okanye uhlale ngasemva: kwizikhundla, kuguquko nakwi-ROI.
Kodwa kuqala masiyicacise le: Kutheni le nto kukho impikiswano malunga ne-SEO ekwiphepha? Emva kwayo yonke loo nto, kukho itoni yezinto ezikhoyo malunga nayo. Iingcali ezininzi zibhale kakuhle ngayo.
Ukutshintsha kwedemografi ye-injini yokukhangela ii-algorithms kutshintshe izinto ezidlala kwindlela umntu akhetha ngayo ukwenza i-SEO. Awusakwazi ukucinga ngokwamagama aphambili kunye namakhonkco angenayo wedwa. Ngokufanayo, awusenakucinga ngokwe-meta kunye ne-alt tags kuphela (ewe, oku kubandakanya itayitile yesihloko, nayo).
Kwiphepha le-SEO alikho nje ngendlela indawo yakho ebhalwe ngayo. Ikwa malunga nokuba indawo yakho ijongeka kanjani ingenamathambo (umbono weerobhothi), kunye nendlela iwebhusayithi yakho ephendula ngayo kwizikrini ezahlukeneyo. Ibandakanya amaxesha okulayisha kunye negunya. Ngolwalathiso olukhokelwe nguGoogle ngo-2013 nangaphaya, kuyacaca ukuba izinto ezikwiphepha kunye nezinto ezingezozamaphepha kufuneka zilungelelane kwaye zivumelane ngendlela engokwemvelo, ecacileyo neyendalo. Kungenxa yoko le nto kufuneka siphonononge iphepha le-SEO ngononophelo ngakumbi.
1. Iimpawu zeMeta sisiQalo nje
Siyazazi kwaye sazisebenzisa i-meta tag okoko zafika. Imeta "igama elingundoqo" ithegi sele ihambile, njengenqaku le-SEO, kodwa ubushushu obuninzi buye baveliswa kwiingxoxo malunga nokusetyenziswa kweethegi zenkcazo yeemeta ezivela kwindawo ye-SEO.
Eyona nto ibaluleke ngakumbi kunaleyo ye-SEO, yinto yokuba ii-meta zenkcazo zinika ithuba lokuchaphazela indlela iwebhusayithi yakho eboniswa ngayo kwiziphumo zophando. Ithegi enkulu yenkcazo yemeta inokucofa iziphumo zakho ngaphambi komgangatho womfo ongasentla kwakho. Kusekuhle ukuziqhelanisa nokusebenzisa amagama aphambili xa unakho, kunye nezazisi zejografi (xa kufanelekile), kodwa okokuqala nokuphambili kufuneka kubeyinjongo yokutsala unqakrazo ebantwini.
2.I-Canonical, iDuplicate, Broken Links, njl.
Iirobhothi zikaGoogle ziye zaba zizilumko kakhulu, ukuya kuthi ga apho amakhonkco aqhekekileyo kunye namaphepha aphindaphindiweyo aphakamisa iiflegi ezibomvu ngokukhawuleza kunebhulethi. Kungenxa yeso sizathu le nto uya kufumana amakhonkco e-canonical (kunye neekhowudi zawo ezihambelanayo) ukuba zibaluleke kakhulu.
Amakhonkco aphukileyo kunye nokuphinda ayisiyiyo nje i-anti-SEO. Banxamnye nabasebenzisi. Uphendula uthini xa unqakraza kwikhonkco elibonisa nje impazamo kwiphepha?
3. Indawo yokujonga iRobot
Isicatshulwa sihlala siyinxalenye ebaluleke kakhulu kuyo nayiphi na iwebhusayithi nanamhlanje. Ngelixa uGoogle ebeka iividiyo kunye namajelo eendaba aphezulu kunamanye ngamagama aphambili, iiwebhusayithi ezinefomathi elungileyo kunye nomxholo osisityebi zisalawula.
Ukufumana umbono wendlela iwebhusayithi yakho ejongeka ngayo kubakhasayo, unokukhubaza iJavacript kunye nemifanekiso (phantsi kokukhetha / Useto lwebrawuza yakho) kwaye ujonge iphepha eliphumela.
Nangona ingachanekanga ngokupheleleyo, isiphumo sihle kakhulu kwindlela iwebhusayithi yakho ejongeka ngayo emkhombeni. Ngoku, qinisekisa zonke izinto ezikolu luhlu lokutshekisha lulandelayo:
Ngaba ilogo yakho iyabonakala njengombhalo?
Ngaba ukukhangela kusebenza ngokuchanekileyo? Ngaba iyaphuka?
Ngaba umxholo ophambili wephepha lakho ubonakalisa kanye emva kokuhamba?
Ngaba kukho naziphi na izinto ezifihlakeleyo ezibonisa xa iJS ikhubazekile?
Ngaba umxholo ufomathiwe ngokufanelekileyo?
Ngaba onke amanye amaqhekeza ephepha (iintengiso, imifanekiso yebhanari, iifom zokubhalisa, amakhonkco, njl. Njl.) Ezibonisa emva komxholo ophambili?
Umbono osisiseko kukuqinisekisa ukuba umxholo ophambili (icandelo ofuna uluqaphele kuGoogle) luza kwangoko kunye nezihloko ezifanelekileyo kunye neenkcazo ezikhoyo.
4. Ukulayisha ixesha eliphakathi kunye nobukhulu
UGoogle kudala waqaphela ubungakanani kunye nexesha eliphakathi lokulayisha lamaphepha. Oku kungena kwi-algorithm yokuma ngokobalo oluninzi kwaye kuchaphazela isikhundla sakho kwii-SERPs. Oku kuthetha ukuba unokuba nomxholo olungileyo kwiwebhusayithi yakho, kodwa ukuba amaphepha alayisha kancinci, uGoogle uya kukulumkela ukukubeka ngaphezulu kwezinye iiwebhusayithi ezilayisha ngokukhawuleza.
5. Cinga ngeSelfowuni, Cinga ngokuphendula
Esi sesinye sezihloko ezishushu ekuxoxwa ngazo kwintengiso ekwi-Intanethi namhlanje. Ukusuka kwiintengiso eziziimobhayili kunye nokhangelo lwasekhaya ukuya kwintengiso kwidesktop / kwethebhulethi, kuyacaca ukuba usiya kwi Indawo elungiselelwe iselfowuni iliza lekamva.
Xa ucinga ngewebhusayithi ephathekayo / ephendulayo, uhamba njani ngayo? Ukuphendula njengakwimibuzo yemidiya yeCSS, okanye imimandla emitsha ngokupheleleyo njenge "m.domain.com"? Ixesha langaphambili liyacetyiswa rhoqo kuba oku kugcina izinto kwindawo enye (ikhonkco lejusi, akukho kuphinda, njl. Igcina izinto zilula.
6. Ugunyaziwe kunye noMlobi
Umbhali-meta ufumana ingqeshiso entsha ngobomi ngeGoogle ekhuthaza UmbhaliRank metric. Kunzima kancinci kunoko ngoku, nangona kunjalo. Kuya kufuneka unike amandla iziqwengana ezityebileyo zewebhusayithi yakho, qiniseka ukuba iprofayile kaGoogle + igcwalisiwe, kwaye uyidibanise nebhlog yakho / iwebhusayithi. I-AuthorRank ivele njenge-metric ebaluleke kakhulu nebonakalayo echaphazela inqanaba lephepha, kwaye yenye yeendlela ezikwiphepha le-SEO ekufuneka uyenzile ngokuqinisekileyo. Ayizukuphucula kuphela inqanaba lakho, kodwa iya kuphucula nenqanaba lokucofa kwii-SERPs.
7. Uyilo akufuneki lube yinto yokugqibela kuLuhlu lwakho
Ngelishwa, kuye kwafuneka ndibhale ngale nto njengento yokugqibela kuba abantu abaninzi bakhumbula kuphela into yokugqibela abayifundileyo kwinqaku. Abantu be-Hardcore SEO bahlala bekujonga ukubaluleka koyilo.
I-Aesthetics kunye nokufundeka okuvela ngokuthe ngqo kuyilo lwewebhusayithi. UGoogle ulungile ekuchazeni oko kubonisa "ngaphezulu kwesibaya" kwiiwebhusayithi, kwaye uGoogle ucebisa ngokucacileyo ukuba ubeke umxholo ngaphezulu kwesibaya ukuze abafundi bakho baphathwe kulwazi endaweni yeentengiso.
Kwiphepha le-SEO alikho kuphela malunga nekhowudi ye-meta kunye ne-URL ye-canonical. Imalunga nendlela iwebhusayithi yakho eqhagamshela ngayo kumsebenzisi nakwirobhothi. Imalunga nendlela oqinisekisa ngayo ukuba iwebhusayithi yakho iyafikeleleka kwaye iyafundeka, kwaye isenolwazi olwaneleyo phantsi kwe-hood yeinjini zokukhangela ukuba zikhethe ngokulula.
tags: kwiphepha-seokwisiza seokwisayithi seoenjini yokukhangela nounSEO
UJayson DeMers ngumseki kunye ne-CEO ye I-imeyileUkuhlaziywaIsixhobo semveliso esiqhagamshela kwiakhawunti yakho ye-Gmail okanye ye-G Suite kwaye ubonise umsebenzi wakho we-imeyile-okanye owabasebenzi bakho. Mlandele phambili Twitter or LinkedIn.
Iingcebiso zokuXhobisa ukuThengisa
Feb 14, 2013 ngo-6: 37 PM
Ke kubonakala ngathi ezona ziqhelo zokwenyani ze-SEO ezikwiphepha lenyani zezona zilungileyo kwiphepha leendlela zokuthengisa ngaphandle kwesibini esingaphandle kwesikhasi. Isithuba esihle.
Feb 14, 2013 ngo-7: 12 PM
Feb 16, 2013 ngo-3: 18 AM
Iposti emnandi kodwa ayifumenanga nto intsha kuyo !!
Mar 1, 2013 ngo 2:26 PM
Thanx Jayson ukubhala inqaku elibalulekileyo.
Mar 19, 2013 ngo 3:02 PM
Enkosi ngeengcebiso Jay, undigcina usexesheni kumdlalo we-SEO.
Epreli 5, 2013 ngo-12: 10 PM
Ndiza kunika inkcazo kwiqela lethu malunga namaqhinga e-SEO ye-lead gen kwaye oku kube luncedo kakhulu. Enkosi! Nibe nolwesihlanu olumnandi.
Epreli 5, 2013 ngo-1: 07 PM
Epreli 9, 2013 ngo-12: 49 PM
Ibhlog emnandi kangaka inolwazi oluhle….
Epreli 23, 2013 ngo-9: 35 PM
kufuneka ndibuyele kwi-SEO yam yeedummies
Epreli 24, 2013 ngo-8: 59 AM
UJayson - umxholo wethu owenziwe ngumsebenzisi kwindawo yethu. Sikwavumela abasebenzisi ukuba bacime umxholo wabo. Ukuba amakhonkco aphukileyo achaphazela i-SEO yethu yezinga, ndingahamba njani malunga nenyaniso yokuba umsebenzisi unokugqiba ukususa isiqwenga somxholo emva kokuba injini yokukhangela isalathisi?
Meyi 3, 2013 kwi-2: 43 AM
Isithuba esihle Jayson, enkosi ngokwabelana 🙂 ungacebisa ngezona ndlela zilungileyo zemeta-tags?
Meyi 3, 2013 kwi-8: 10 AM
Iinkcazo zeMeta zibalulekile ekuhengeni abasebenzisi be-injini yokukhangela ukuba bacofe, soloko unethegi yenkcazo yemeta enyanzelisayo. Ithegi yamagama angundoqo e-Meta iyaqhubeka nokungahoywa ziinjini zokukhangela kodwa ezinye ii-apps zohlalutyo ziyazisebenzisa. Iithegi zemeta zeJografi azibonisanga zithembiso zininzi, kodwa ndingazongeza nayo nayiphi na idatha yendawo. Ngaba oko kuyanceda?
Meyi 3, 2013 kwi-10: 06 AM
Molo Douglas, enkosi ngokulandelayo: kuhle ukufumana ingcebiso yakho! abanye abantu basixelela ukuba iithegi zethu ze-SEO azilungile, kwaye ndaguqukela kwiingcali zoncedo 🙂 oku kuyanceda! malunga nobude besihloko kufuneka bube?
Meyi 3, 2013 kwi-10: 28 AM
Ngokuqinisekileyo - isihloko kufuneka sibe ngaphantsi kwama-70 abalinganiswa. Khangela "Indlela yokwenza ngcono" kule bhlog kwaye sinenyathelo elilungileyo ngenyathelo!
Meyi 15, 2013 kwi-3: 27 AM
Eli nqaku liluncedo. Ndizifakile kwindawo yam. Ixesha lam lokulayisha indawo yi-88. Zonke iithegi kunye ne-js zisetyenziswe ngononophelo, kodwa indawo yam indawo yi-2 kuphela.
Meyi 21, 2013 kwi-12: 56 PM
Ndifunda iingcebiso ezininzi mva nje malunga 'nomxholo ogoqiweyo'. Ngaba oko kuthetha ukuba i-template eqhelekileyo / idizayini yomxholo esiyibonayo phaya - isilayidi somfanekiso omkhulu ngasentla, iibhloko ze-3-4 zomxholo ongezantsi, kunye nomxholo womzimba ezantsi - ungqubana ngqo naloo ngcebiso?
Meyi 21, 2013 kwi-1: 05 PM
@google-323434ee3d2d39bcbda81f3065830816:disqus amanye awona maphepha aguqukayo angcono kwi-Intanethi made kakhulu, anekopi ende, ubungqina, uphononongo kunye neenkcazo zemveliso. "Ngaphezu komqolo" uyaqhubeka ukuzoba ucofa ngakumbi kumndilili, kodwa abasebenzisi basetyenziselwa ukuskrola kwaye bangakhathali. Ndingenza iphutha kwicala lovavanyo kwaye ndibone ngaphambi kokuba ndenze yonke into ibe yindawo emfutshane.
Meyi 21, 2013 kwi-1: 20 PM
Enkosi @douglaskarr:disqus .. uthetha ngamava omsebenzisi kunye ne-CTR, kodwa into endikhathazayo kula (kunye namanye) amanqaku, luluvo lokuba, "uGoogle ulungile ekucingeni ukuba yintoni ebonisa "ngaphezulu kwesibaya" iiwebhusayithi”. Oku kundenza ndizibuze ukuba nokuba indawo esebenza kakuhle kwicala le-ux / ukuguqulwa iyohlwaywa ngandlela thile. Naziphi na iingcinga ngaloo nto okanye ngaba ndiyifunda kakubi?
Meyi 21, 2013 kwi-1: 24 PM
Andinakuze ndingagqibekanga kuGoogle ngokuchasene namava omsebenzisi. Ngapha koko, ndingatsho ukuba iisayithi ezinomxholo wephepha elingekho nzulu zihlala zinzima kakhulu ukuzibeka kwindawo. Abathengi bethu babona iziphumo ezingcono xa benomxholo 'ongqindilili'. Ukuba abasebenzisi bakho bayawuthanda umxholo wakho, uGoogle uya kuwuthanda umxholo wakho!
Iinkonzo ze-SEO ze-MOS
Jun 21, 2013 ngo-3:06 AM
Eyona elungile. Enkosi ngokundikhumbuza ngokubaluleka kwe-snippet etyebileyo kunye nenqanaba lombhali.
Nov 4, 2013 ngo-7:03 AM
Ndiyayibulela inzame oye wayibeka kweli nqaku ukunika eyona ndlela ifanelekileyo kunye neyona ndlela yamva nje ye-SEO yokubeka umgangatho ophezulu kwiinjini zokukhangela. Ezi zidla ngokujongwa ngamanqaku amaninzi njengoko uninzi lugxininisa kuphela kwiithegi zemeta, isihloko sephepha kunye namagama angundoqo njalo-njalo ngelixa ungahoyi izinto ezibalulekileyo zokukhangela. Enkosi.